इलाममा रोकिएन आत्महत्या, विश्‍वमा वार्षिक ८ लाख जनाद्वारा आत्महत्या ! (भिडियो सहित) - Nayabulanda.com
इलाममा रोकिएन आत्महत्या, विश्‍वमा वार्षिक ८ लाख जनाद्वारा आत्महत्या ! (भिडियो सहित)
राम योङहाङ २५ भाद्र २०७६, बुधबार ०१:०५ 558 पटक हेरिएको
इलाम : आत्महत्या रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन हुने गर्दछन् । सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दछन् । तर आत्महत्यादर घट्नुको साटो उल्टै बढ्न थालेको छ । यसबाट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यतिबेला बढ्दो आत्महत्या न्युनिकरणका लागि चिन्तित छन् ।
इलाममा ५ वर्षमा ५१८ ले गरे आत्महत्या
इलाममा मात्र ५ वर्षको अवधिमा ५ सय १८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये ३ सय १५ पुरुष र १ सय ९८ जना महिला रहेका छन् । मंगलबार अन्तरराष्ट्यि आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा इलाम सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरीले त्यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो ।
टिपिओ नेपालसँगको सहकार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति इलामको आयोजनामा भएको जिल्ला स्तरीय कार्यशाला गोष््ठीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रहरी इन्सपेक्टर सन्तोषकुमार बुढाथोकीले सो तथ्याङ्क सार्वजिक गरे ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दोश्रो वर्ष केही घटेपनि तेश्रो र चौथो वर्ष निरन्तर आत्महत्यादर बढेको पाईएको छ । त्यस्तै पाँचौ वर्ष कही घटेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै आत्महत्या बढ्को पाईएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१।७२ मा ९७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । ५६ पुरुष र ४१ महिलाले आत्महत्या गरेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ९१ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै ५ जनाले बिष सेवन गरेर र १ जनाले हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७२।७३ मा ५७ पुरुष, ३९ महिला, ४ बालक र २ बालिकासहित ९४ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ९१ जनाले झुण्डिएर तथा एक एक जनाले विष सेवन गरेर, आगो लगाएर र हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए ।
आव ०७३।७४ मा १ सय ८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । ६२ पुरुष र ४४ महिला तथा एक एक जना बालक र बालिकले आत्महत्या गरेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ९९ जनाले झुण्डिएर, ८ जनाले विष सेवन गरेर र १ जनाले हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए ।
आव ०७४।७५ मा १ सय ११ जनाले आत्महत्या गरे । ७२ पुरुष र ३७ महिला तथा एक एक बालिकाले आत्महत्या गरेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ९२ जनाले झुण्डिएर, १६ जनाले विष सेवन गरेर र एक एक जनाले आगो लगाएर, हाम फालेर र औजार हतियार प्रयोग गरेर आत्महत्या गरेका थिए ।
आव ०७५।०७६ मा भने आत्महत्याको संख्या घटेको छ । यस अवधिमा ६३ पुरुष, ३४ महिला र २ बाललकले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ९२ जनाले झुण्डिएर, ६ जनाले विष सेवन गरेर, १ जनाले हाम फालेर र २ जनाले औजार हतियार प्रयोग गरेको प्रहरी इन्पेक्टर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा आत्महत्या बढी
यता देशभरको तथ्याङकमा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी आत्महत्या भएको पाईएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उदृत गर्दै टिपिओ नेपालका कार्यकारी निर्देशक मनोचिकित्सक डा. कमल गौतमले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा सबैबढी आत्महत्या भएको देखिएको छ ।
आव २०७४।०७५ र ०७५।०७६ को ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश १ मा प्रदेश १ मा १ हजार १ सय ११ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । डा. गौतमका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतले आत्महत्या गर्नेको संख्यामा वृद्धि भईरहेको छ । नेपाल आत्महत्या गर्ने देशमध्ये विश्वमा ७ औं स्थानमा पर्दछ । महिलालाई मात्र हेर्ने हो भने अझ नेपाल विश्वको तेश्रो स्थानमा पर्दछ । नेपालमा दैनिक १६ जनाले आत्महत्यँ गर्ने गरेको पाईएको डा. गौतमले बताए । त्यसमध्ये १५ देखि ४५ वर्ष उमेरसमूहका बढी छन् ।
उता विश्वलाई हेर्ने हो भने वार्षिक ८ लाख जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाईएको छ । विश्व स्वास्स्थ संगठनको प्रतिवेदन अनुसार ४० सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । विश्वमा ३ सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछन् । आत्महत्या गर्ने भन्दा आत्महत्याको प्रयास गर्ने २० गुणा बढी भएको अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ ।
टिपिओ नेपालका डा. कमल गौतमका अनुसार ७५ प्रतिशत आत्महत्या न्युन आय भएका र विकासोन्मुख देशमा हुने गर्दछ । जसमध्ये ३९ प्रतिशत दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुक भारत र चीनमा आत्महत्या हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४५ वर्षको अवधिमा विश्वमा आत्महत्याको दर ६० प्रतिशले वृद्धि भएको पाईएको छ । विगतमा ६० वर्ष भन्दा बढी उमेर समूहकाले आत्महत्या गर्ने भएपनि पछिल्लो समय १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहकाले बढी आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
विश्वमा बढ्दो आत्महत्याको कारण मानसिक समस्या नै रहेको मनोचिकित्सकहरुको भनाई छ । विभिन्न कारणले मस्तिष्कमा असर पुर्याएर आत्महत्याको बाटो रोजन बाध्य हुने गरेको बताईएको छ ।
विभिन्न दव्र्यसनी, दीर्घ रोगी, पारिवारिक अवहेलना, घरेलु हिंसा, आर्थिक विपन्नता, पारीवारीक कलह, इच्छाएको पूरा नहुनु जस्ता कारणले मानिसमा डिप्रेसन हुँदै आत्महत्यसम्म पुग्ने गरेको टिपिओ नेपालका कार्यकारी निर्देशक मनोचिकित्सक डा. कमल गौतमले बताए ।
उनले कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिले कुनै न कुनै संकेत दिने भएकाले सरोकारवालाहरु सचेत र सक्रिया भएमा तत्काल उपचार गरेमा आत्महत्याबाट बचाउन सकिने बताए ।
आत्महत्या रोकथामका लागि संयुक्त अभियान
सरोकारवालाहरुले पछिल्लो समय विकराल बन्दै गएको आत्महत्या रोकथामका लागि सबै पक्ष मिलेर अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले जिल्लामा बढ्दो आत्महत्या दर रोकथाम गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न सचेतनामूलक अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले आत्महत्य रोकथाम गर्न लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर इलाम अस्पतालमा एक जना मनोचिकित्सकको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरोकारवालाहरुले नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गरी आत्महत्या रोकथाम गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका लागि आफूहरुले पनि सहयोग गर्ने सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जनाए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पत्रकार, गैरसरकारी संस्था तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागि रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरकण टिपिओ नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. कमल गौतम र पार्वती श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयले आत्महत्याको सम्बन्धमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
सन्दकपुर गाउँपालिकामा मनोविमर्श सेवा
यता सन्दकपुर गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि नै आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । स्थानीय युनिट इन हेल्थ नामक संस्थासँगको साझेदारीमा गाउँपालिकाले सो अभियान संचालन गरिरहेको छ ।
प्रत्येक महिना मनोचिकित्सकको उपस्थितीमा सबै वडामा मानसिक रोग सम्बन्धी अन्तरक्रिया र शिविर संचालन गरी मनोविमर्श सेवा प्रदान गरिदै आएको सन्दकपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताए ।
अभियान संचालन भएपछि ९२ जनाले प्रत्यक्ष सेवा पाएको र सन्दकपुर गाउँपालिकाबाट एक जनाले पनि आत्महत्या नगरेको अधिकृत राईको दावी छ ।